Kuwaani waxay noqon karaan qaraarada shaashadda ee iPhone 6 | Wararka IPhone
Qaraarada iPhone 6 waxay noqon karaan 1334 x 750 iyo 2208 x 1242 pixels
Alex Ruiz | | iPhone 6, dhowr
Inta la sugayo xaqiijinta rasmiga ah ee Apple ee Muhiimka ah ee dhici doonta bisha Sebtember, ee sanadkan iPhone 6 oo leh laba nooc oo cabbirka shaashadda ah, iPhone 6 oo leh shaashad 4,7-inji ah oo ah isbeddelka kan hadda socda iyo kan iPhone 6L oo leh cabbirka shaashadda oo ka weyn 5,5 inji. Dhammaan xanta iyo xogaha bilihii la soo dhaafay waxay soo jeedinayaan in shirkadda Cupertino ay ugu dambeyntii dooratay labadii cabir ee hore.
Hada blogger caan ah oo ku saabsan Apple, John gruber, ayaa daabacay a maqaal faahfaahsan inuu yimaado fikirka ah qaraarada keenaya labada nooc ee iPhone 6. Sida uu sheegayo Gruber iPhone 6 4,7 XNUMX. shaashad xal u heli lahaa 1334 x 750 pixels oo ah cufnaanta 326 ppi (dhibco halkii inji), halka walaalkiis ka weyn, ah 6 ″ iPhone 5,5, Waxaan ku dhajin lahaa bandhig leh qaraar 2208 x 1242 pixels oo leh cufnaanta 461 ppi.
Saadaasha tifaftiraha waxay ku saleysan tahay horumarinta dalabka, Fududeynta shirkadda leh tufaaxa la qaniinay waxay siin doontaa horumariyeyaasha si ay ula qabsadaan codsiyadooda tirada tirada shaashadda kala duwan ee jiri doona bilaha soo socda. Qiyaasta 326 ppi ee 6-inch iPhone 4,7 waxay noqon doontaa xalinta isha oo laba laab ka badan tii hore ee iPhone, sida tan hada ay bixiso iPhone 5S waana ay jirtaa tan iyo iPhone 4. Dhinaceeda 461 ppi qaraar ee iPhone 6 oo leh shaashad 5,5-inji ah 3 jeer cufnaanta shaashadda asalka ah ee iPhone, waxay noqon lahayd muuqaalka kore ee isha 2, kaasoo kacdoon ka sameyn lahaa suuqa, isagoo ah taleefanka casriga ee leh shaashadda ugu sareysa xallinta.
Waa in lagu xisaabtamo taas Maaha war xan iyo shaashadaha la kashifay Go'aamadan, waa falanqaynta ugu habboon ee horumarinta iyo la qabsiga codsiyada isbeddelka shaashadaha raaci doonaa saamiga cabbirka qalabka. Iyadoo ay weheliso xanta dhabta ah ee sii kordheysa ee laba nooc oo iPhone 6 ah, Apple waxaa laga filayaa inay soo bandhigto a isbedelka taabashada iD, processor-ka waxtar badan iyo bateriyaal leh madax-bannaanidooda. Wax walba waxay muujinayaan in Muhiimka la qaban doono Sebtember 9 taas oo dhammaan wararka xanta ah ee ku saabsan jiilka soo socda ee taleefanka Apple lagu caddeeyo lana xaqiijiyo.
Maxaad u maleyneysaa kuwan iPhone 6 qaraarada shaashadda? Miyaad ku raacsan tahay Jhon Gruber?
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Terminalka IPhone » iPhone 6 » Qaraarada iPhone 6 waxay noqon karaan 1334 x 750 iyo 2208 x 1242 pixels
Faras weyn, soco ama ha socon
2.208 x 1.242 wuxuu kacaan ka sameyn doonaa suuqa, isagoo ah taleefanka casriga ee leh shaashadda ugu sareysa xalinta.
LG G3 oo horey loo iibiyay .. waxay leedahay qaraar dhan 2.560 x 1.440 oo isku cabir ah 5,5….
Apple had iyo jeer waxay raadineysaa inay wax u fududeyso horumariyeyaasha oo haddii tufaaxu si dhab ah u sii daayo laba taleefan, wuxuu sameyn doonaa wixii uu waligiis sameeyo…. waxay u adeegsan doontaa qalab isku mid ah labadaba (tusaale .. ipad Air iyo ipad mini retina .. isla ipad .. oo leh astaamo isku mid ah marka laga reebo farqiga cabirka shaashadda (ma ahan qaraar ..)
Taleefannada casriga ah ee xallinta sare leh? Suuqa ma laga rogaa? Ama isku day inaad khiyaanayso akhristayaasha baloogyada ama waa inaadan ka tegin aaladda tufaaxa, runtu waxay tahay ma ogi midka labadoodaba midka xun.
Tifatire kale oo ka socda iskuulka ugu xanuunka daran maanta ee iphone, ka xumahay inay jiraan laba nooc oo xallin ah, caadi ah iyo tufaax, waa ka xumahay cunug
Ku jawaab uff
Adiga hadaad siiso xanuun faallooyin si aad u dhaleecayso qoraa ku jiray balooggan muddo dheer.
Ku jawaab Naano
Murugada horyaalku ma bixiso waa inuu runta sheego, isagu ma allifto waxyaabo lagu sharfayo tufaaxa sida qoraha warkan, tusaale ahaan xallinta shaashadda marka loo eego tan LG G3 ayaa ka sarreeya oo baloog heerkan ah Xaqiiqdii wuu ogyahay waxa suuqa ku jira, ilaa uusan ka tagin xumbada Apple horayba waa caadi oo uusan ka ogayn wax badan oo ku saabsan shirkadaha kale.
Ku jawaab jose antonio
Marka hore waa xan, sida kuwa kale oo badan. Haddii qaraarku noqon lahaa mid la yaab leh, laakiin sidoo kale ilaahnimada pixel 461, waxay noqonaysaa tii ugu horreysay ee iPhone ka badata 326 ee 5s / 5c / 5 / 4s / 4 jirta.
maxaa yeelay iPhone 5 uma wici karo wicitaan mobilo kasta oo shaqeynaya oo aan lahayn FaceTime ama tango ama fring? Apple ma arki laheyd wax laga sameyn karo wicitaan fiidiyoow ah oo ka socda moobaylka ilaa mobilada 3G oo aan lahayn internet? Apple nidaamkan ma leh tan, waxay ahayd guuldaro aad u weyn oo dhanka Apple ah oo aan xisaabta ku darsan
Oo waa maxay cadaabta aad sheegayso? Waxaad weydiineysaa su'aalo aan micno lahayn oo waxaad moodaa inaad toos uga soo jeedo maskaxda adduunka, is ogeysii intaadan wax ka cabanin oo aad is ceebeyso
Ku jawaab Manuu
2.560 x 1.440. Iyo 1Gb Ram… aad u wanaagsan good. Waan hubaa in horumariyayaashu ay aad u farxi doonaan, aan ku aragno go'aammadaas sida qurxinta iyo saameynta 1Gb ee Ram… si fiican… maxaa ceeb ah… ..
FK69 «sida maskaxda maskaxda iyo saameynta 1Gb ee Ram ...»
Maxaad uga jeeddaa cadaabta? Maskaxda maskaxda iyo saamaynta? Baro muujinta naftaada goor dambe.
Apple waxay u taagan tahay wax waxayna ku jirtaa tayada barnaamijkeeda oo ay weheliso qalabka, iyo in farxad gelinta horumariyeyaashu ay tahay mid ka mid ah ujeeddooyinkeeda, markaa ha dhayalsan maxaa yeelay 1 GB wan ayaa waddo dheer ku mari kara iPhone-ka, ma aanan sameynin faham faalladaada laakiin hubaal tani waa jawaabta.
Ku jawaab Odasarter
Had iyo jeer dib ugu laabo isla shay, waxaan hore u ogaanay sida ugu wanaagsan ee ay iPhone wax u wanaajiso, kaas oo dhammaan noocyadiisa oo dhan ay tahay inay hagaajiyaan hagaajinta batteriga, tusaale ahaan ... gig-ga RAM aad ayuu u gaaban yahay sabab fudud, dhab ahaan multitask. Waana inay kordhiyaan, si ay u sii dheeraadaan cimrigooda alaabtooda, saaxiibkay wuxuu haystaa iPhone 4 oo hadda waa baradho, way adag tahay inuu ciyaaro ciyaaro fiican oo aan kala joogsi lahayn (haddii taasi ay tahay intee in le'eg ayay "iPhone 6L" , 2 sano ilaa Hel barnaamij aan awoodin inuu si sax ah u shaqeeyo, waxaan qarash gareeyaa in kabadan € 700, marka ay jiraan fursado sifiican oo isku mid ah u wanaagsan), intaasna waxaa usii dheer, macruufka 8 ma gaarayo, sida muuqata 512 Mb ee RAM, haddii aysan dabcan ahayn, sida mustaqbalka, dabcan, isla waxbaa dhici doona mar kale, markay u baahan tahay in ka badan 512 nidaamkan, aaladaha 1Gb way dhammaadeen.
oo waxaan weyddiinayaa….
IPHONE-KA MA LOOGU TILMAAMI DOONAA JOOQ?
Waxaan sidaa u leeyahay inta aan dhaleeceynay taxanaha isgaarsiinta android-ka.
ama maxaa yeelay tufaaxa ayaa soosaara waxa leysku yiraahdo, mar dambe ma noqon doonaan leben?
iyo halkan oo marar badan aan munaafiqiin nahay marka sumadda aan jecel nahay ay ku dareyso cabirka android kale oo aan ku amaano tufaax….
Waxaan rajeynayaa inay tahay xanta uun! Shaashadda ugu yar ee 4,7 waa inay lahaataa xallinta fullHD si ay uga faa'iideystaan ​​cayaaraha cusub ama ugu yaraan ay qaataan nooc shaashad ah oo ka duwan 5s-ka oo leh midabbo aad u badan! 1gb RAM ah? Ma arko .. 2 uguyar! Waxaan rajaynayaa sidaas, maxaa yeelay haddii aakhirku yahay gb .. Markaan haysanno JAILBREAK ma ogaan doonno dheecaanka ay ku shaqeyneyso la'aanteed iyadoo 2gb ay aad u kala duwan tahay Waxaan haystaa 5s daacadiina si dhib yar ayaan ogaadaa waxna .. Mararka qaar hadaan haysto barnaamijyo badan oo ku furan Auxo 2 .. Waxaan ogaadaa inaysan ushaqeyneynin si habsami leh taasna waxaa ugu wacan GB-ka RAM ee uu haysto.
Laba fikradood oo ah waxa gadaasha iPhone 6 noqon doono
Ku keydi ilaa € 130 adoo iibsanaya iPad-ka la cusboonaysiiyay ee Apple